Excessive tariffs stall independent power projects – expert - The Source
Excessive tariffs stall independent power projects – expert
Posted on June 3, 2015 in Energy, Investment, Zimbabwe
By Kuda Chideme, HARARE June 3 (The Source) – The excessive tariffs being imposed on Independent Power Producers (IPPs) by several government departments are preventing energy projects from taking off, an industry expert has said.
Zimbabwe, whose current power generation capacity can only meet half its peak electricity demand of 2,200MW, needs IPPs to plug in the gap. The Zimbabwe Energy Regulatory Authority (ZERA) has licenced 22 IPPs so far, but 14 of those are not operational.
Great Zimbabwe Hydro director Oswell Chakwanda told The Source on the sidelines of an IPP Indaba held in the capital on Wednesday that the charges being levied were making some of the projects unviable.
Chakwanda urged a review of the tariffs, which he said would enable IPPs to take off in under 12 months after being licensed.
Previous Post: Mwana Africa CE Mpinga says requisition ‘an unnecessary distraction’
Next Post: Fired Meikles workers put management under siege in Bulawayo